Daawo: Raysawasaaraha Ingiriiska oo booqday dhakhtar ku yaala London oo uu ku xanaaqay dhakhtarkii oo uu ku qayliyey dibadana uga bax ku yidhi. | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Daawo: Raysawasaaraha Ingiriiska oo booqday dhakhtar ku yaala London oo uu ku xanaaqay dhakhtarkii oo uu ku qayliyey dibadana uga bax ku yidhi.
Published on April 24, 2015 by sdwo · No Comments
Tani waxay ku tusaysaa sida umadaha kale horumarka uga gaadheen is dhegaysiga iyo is qadarinta. Waxayna muujinaysaa in nin waliba halka uu ka taliyo isagu uu go,aankiisa leeyahay laguna tixgeliyo. Dhakhtarkani waxa uu arkay Raysawasaaraha ingiriiska oo sawir ololaha doorashada ku gelaya dhakhtarka dhexdiisa isagoo nin jiifa sariir oo ka mid ah bukaanka dhakhtarka ay raysawasaarasha iyo ku xigeenkiisu labada hareerood ka fadhiyaan oo ay la sheekaysanayaan ayaa waxa soo dul istaagay dhakhtarkii ward ka oo ku qayliyey kuna amray inay dibada uga baxaan dhakhtarka isagoo la maqlayo isagoo leh ( get-out). Raysawasarahiina isagoo degdeg uga baxaya oo raaligelin bixinaya ayuu hadal la,aan dibada uGu baxay. Bal hadaba qiyaas dhakhtar Somaliland ku yaala isagoo madaxweyne Sillaanyo booqanaya oo dhakhtar intuu sidaa uGu qayliyo yidhaah dibada uga bax. Waxa xaqiiq ah sida caadada inoo ahayd inmarkiiba dhakhtarka ay ku degilahayeen ciidamada RRU oo intay garaacaan oo ay dhulka ugu tuuraan, markuu nuuxsanwaayana gaadhiga xagiisa danbe intay ku tuuraan xarunta CID da ku xidhi lahaa bilo dhan hadanay noqonba in sanado lagu xukumo.